BOOSAASO, Puntland- Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga Puntland, halkaasoo soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay.
Madaxweynaha ayaa ka hor inta husan garin Boosaaso wuxuu sii maray tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaalla inta u dhaxaysa Qardho iyo Boosaaso.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaalkiisan ugu magac daray safarkii Nabadda ee dalka ayaa waxa ku wehelinaya, Madaxweynaha Puntland, mas'uuliyiin kamid ah dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland.
Madaxweynuhu wuxuu kusii hakaday degmada Waaciya, halkaasoo uu kula hadlay saraakiisha Booliiska iyo dadweynaha ku wool magaaladaas, isagoo u jeediyay khudbad uu diiradda ku saaray ka shaqaynta nabadda iyo hormarka Soomaaliya.
Wafdigan ayaa ugu dambayn gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo lagu wado inuu ku joogo booqasho qaadan doonta saddex cisho, isagoo lagu wado inuu la kulmo qaybaha kala duvan ee bulshada.
Farmaajo oo goob fagaare ah kula hadlayay boqolaal dadweyne ah oo soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay ayaa yiri, "Walaalayaal soo dhaweyntiinna diirran waxa ay ka tarjumeysaa in aad tihiin dad dowladdooda jecel, anagana waxaa nagu ballan ah in aan idiin adegno. Idinkana waxaan idinka codsaneynaa in aad taagerdiina sii waddaan oo aad garab istaagtaan dowladdiina.”
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa la filayaa in socdaalkoodan ay ku soo gaba-gabeeyaan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo ay uga sii gudbi doonaan gobollada dhexe ee dalka sida qorshuhu yahay.
Laamaha ammaanka Puntland oo fashiliyey "weerar argagixiso"
Puntland 20.01.2020. 22:04